I-China 360 CryoLipolysis Machine ukwakha umzimba kabusha Ukwakha kanye neFektri | I-GGLT
I-360 Cryo iguqulwe ubuchwepheshe bamuva bokupholisa ukususwa kwe-cellulite obusebenzisa i-applicator ekhethekile engu-360 ′ ukukhomba amafutha anenkani amelana nezinguquko ekudleni nasekuzivocavoca umzimba, aqandisa ngempumelelo, aqede futhi aqede unomphela amaseli amafutha ngaphansi kwesikhumba ngaphandle kokulimaza izingqimba ezizungezile.
2.Localised fat ukususwa.
I-5.Body slimming, Hlela kabusha umugqa womzimba.
6.Painless futhi zikhululekile.
7.Thuthukisa ukujikeleza kwegazi.
8.Combine cryolipolysis, ukwelashwa nge-cavitation nge-RF ukukhulisa umphumela wokuncipha.
1.ubuchwepheshe obusha bokupholisa abuzuzi nje kuphela umphumela wokupholisa we-360 °, kepha futhi kugcina ukushisa okufanayo endaweni ngayinye yesibambo, ukugwema ukwehluka kwamazinga okushisa kulimaza isikhumba.
Ukuhlolwa kokuphepha okuzenzakalelayo kutholakala ngokusebenzisa izinzwa eziningi ngaphakathi komshini nezinqubo zokuzihlola uhlelo ukuqinisekisa ukuphepha komshini, ukubeka ukuphepha kwasekuqaleni.
Thinta I-cryo enkulu
Screensize 10.4 3 # 215 * 100mm
Phatha isikrini 4.5 I-cryo encane
I-Sillicon 3 # 165 * 90mm
-10 ℃ / 45 ℃ Isilevu esiphindwe kabili
0.08MPa Imvamisa yekhanda le-Cavitation 40KHz
Ubuso be-RF 3MHz Laser
I-Q1: Umphumela wokwelashwa unjani?
I-A1: Sineqembu lokuqeqeshelwa umsebenzi, futhi ngemuva kokuqeqeshwa, abasebenzisi bangafeza umphumela omncane wokunciphisa umzimba. Umphumela wokwehliswa kwesisindo ngokomtholampilo, ulahlekelwe isilinganiso samafutha esingu-4cm emavikini ama-2.
I-Q2: Ukuletha kanjani imvamisa kuyindlela elula kunazo zonke?
I-A2: Imvamisa nge-DHL / TNT / FedEx noma okunye ukuthuthwa komoya. Ikhuluma ngezinsuku ezingama-3-5 ezizotholwa ngamakhasimende.
I-Q3: Ungakuvikela kanjani ukuphepha komshini ngesikhathi sokuhamba?
I-A3: Sisebenzisa ulwelwesi olujiyile lwe-foam, isikhwama sendwangu esinobufakazi bomswakama, ibhokisi le-aviation aluminium ukuqinisekisa ukuthuthwa kokuphepha komshini.
I-Q4: Ngikufunda kanjani ukusebenzisa nokugcina umshini njalo?
I-A4: Sinikezela ngamavidiyo wokuqeqeshwa aku-inthanethi nethimba losizo lobuchwepheshe lobuchwepheshe ukukusiza ukuxazulula izinkinga ohlangane nazo amahora angama-24.
Langaphambilini umshini we-cryotherapy ophathekayo wokunciphisa umzimba
Olandelayo: Ukubaza okupholile ama-4 Kusingatha Umshini wokulahleka kwamafutha
I-cryolipolysis RF Cavitation Lipo umshini wokunciphisa umzimba
i-cryotherapy ebusweni kanye ne-cryo body slimming cryol ...